समय दृष्टिको प्रथम वार्षिकोत्सव सम्पन्न, दीपक शर्मा जंगमको ‘दृष्टिकोण’ लोकापर्ण « रिपोर्टर्स नेपाल
(Monday 27th September 2021)
समय दृष्टिको प्रथम वार्षिकोत्सव सम्पन्न, दीपक शर्मा जंगमको ‘दृष्टिकोण’ लोकापर्ण
प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार
काठमाडौं, ४ भदौ । रोशी डिजिटल प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित समय दृष्टिको प्रथम वार्षिकोत्सव आज सम्पन्न भएको छ । लेखक तथा अधिवक्ता दीपक शर्मा जंगमको ‘दृष्टिकोण’ पुस्तक आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा लोकापर्ण गरिएको हो ।
कर्णजित शुशिल बुढाथोकी, पुर्व सभासद तिलक थापा मगर, खड्क बहादुर वाइवा र अतिथि सबैले पुस्तक लोर्कापण गरेका थिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता दिपक शर्मा जंगमलाई आज रोशी डिजिटल प्रा.लि.ले सम्मान गरेको छ ।
रोशी डिजिटलका अध्यक्ष पुण्य बहादुर लामा (अरुण घिसिङ) ले १ वर्ष अगाडि सुरु गरेको पत्रिकाको सुरुवाती दिनमा नै कोरोना कहर सुरु भएको बताए । उनले २०७७ साउन ३० गते स्थापना भएको समय दृष्टि १ वर्ष पुरा भएर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको जानकारी दिए । उनले सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिए । राज्यको चौथो अंगको रुपमा परिभाषित गरेको पत्रकारीताले सम्पुर्ण पक्षलाई समेट्न सक्यो कि सकेन त्यो महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले आगामी दिनमा सबैपक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताए ।
लेखक तथा अधिवक्ता दीपक शर्मा जंगमले लेख्नलाई निकै गाह्रो हुने बताए । शर्माले कामको बाबजुद पनि बिभिन्न विषयमा कलम चलाएको बताए । उनले भने, ‘न्यायालय, राज्यका बेतिथी, अन्यायको कुरा, सरकारको गलत कुरालाई पुस्तकमा समेटेको छु ।’ उनले कुनै पनि राजनितिक दलको बारेमा पुस्तकमा उल्लेख नगरको बताए । उनले पुस्तक आफ्नो पहिलो जर्मको भएको र आफु बिरामी हुँदा पनि लेख्ने काम निरन्तर अगाडी बढाएको सुनाए । पुस्तक पढेर प्रतिक्रिया र सुझाव दिन समेत सबैलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अधिवक्ता हरिशरण बस्नेतले कानुन व्यवसायी भएर वकालत गर्दै गर्दा दीपक शर्मा जंगमले व्यवस्ताको बाबजुद पनि महत्वपूर्ण कार्य गरेको भन्दै देशको समय सान्दर्भिक कार्यलाई पाठकवर्गमा लैजाने जमर्को गरेको बताए । उनले शर्माले राष्ट्रको लागि कानुन व्यवसायीले गर्नु पर्ने कर्तव्य पुरा गरेको जिकिर गरे । पत्रिकाले राम्रो काम गरेको बताउदै अबको दिनमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सहयोग हुने जानकारी दिए । शर्माले पाएको सम्मानले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी नै सम्मानित महसुस गरेको बताए । कार्यक्रम संचालन समय दृष्टिका प्रधानसम्पादक योगेश याङछालीले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कार्यकारी सम्पादक इन्दिरा वाइवाले पत्रिका संचालनमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन् । आगामी दिनमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा पूर्व सभासद तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष कर्णजित शुशिल बुढाथोकी, रोशी डिजिटल प्रा.लि.का सल्लाहकार तथा पुर्व सभासद तिलक थापा मगर, नेपाली कांग्रेसका सिन्धुलीका उपसभापति खड्क बहादुर वाइवा लगायतको उपस्थिति थियो ।
रोशी डिजिटल प्रा.लि.ले दीपक शर्मा जंगमलाई निरन्तर पत्रिका प्रकाशनमा सफल भएको र लेखकले सुरुवाती दिनदेखि नै निरन्तर लेखिरहेको भन्दै सम्मान गरेको हो ।
नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै
काठमाडौं, ११ असोज। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणदर घट्दै गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि
आज थप ७ संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौं, ११ असोज । कोरोना संक्रमणबाट आज थप ७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै
आज संक्रमित हुने र निको हुने बराबर
काठमाडौं, ११ असोज। आज नेपालमा कोरोना भाइरसका १ हजार २ सय ८२ जना संक्रमित थपिएका
‘एक/दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ, सय दिन नपुग्दै सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्नुहुँदैन्’ : रमेश लेखक (भिडिओसहित)
‘तोकिएकै मितिमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ’ काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली
भारतीय राजदूतावासद्वारा वनविज्ञान अध्ययन संस्थानलाई शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण
वाग्मती, ११ असोज: भारतीय राजदूतावासको काउन्सिलर अफिस वीरगञ्जले मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई
ओलीलाई भीम रावलको प्रश्न : तपाईँ कतिञ्जेलसम्म दश बुँदे कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ?
काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र
सय दिन पनि पूरा नहुँदै कसरी सरकारलाई असक्षम भन्न मिल्छ ?
काठमाडौं, ११ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि नै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन्
ओलीको पेलाईसामु टिक्लान् यी नेताहरु ?
काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा झन् प्रभाव बढाएका छन्
राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संसोधन) २०७८ खारेज गरेकी
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको लागि सिफारिश
काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेको
माधव नेपालले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुँगो लगाए, को-को जाँदैछन ? (नामसहित)
काठमाडौं, ११ असोज । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने